Dowladda Somalia oo ka laabatay Warkii ay ku sheegtay in Dadkii lagu dilay Bariire ay ahaayeen Alshabaab. – Hornafrik Media Network
Warsaxaafadeed ay soo saartay Wasaaradda Warfaafinta oo ku qornaa English ayaa lagu sheegay in 2 Hawlgal ay ka dhaceen Agagaarka Bariire, isla markaana mid ka mid ah ay ku waxyeeloobeen Dad Shacab ah.
Warsaxaafadeedkan oo ka soo baxay Wasaaradda Warfaafinta ayaa lagu sheegya inay muuqato in 2 Hawlgal ay dhaceen, isla markaana mid ka mida ay waxyeelo ka soo gaartay Dad Shacab ah. Waxayna Dowladdu sheegtay in arrintan la baarayo sideey ku dhacday, iyadoona Shacabka laga dalbaday inay ku gacan siiyaan Dowladda arrintan.
Saacado ka hor ayeey isla Dowladda Somalia soo saartay Warsaxaafadeed ay ku sheegayso in Dadka Shacabka ah ee la dilay ay ahaayeen Alshabaab, taasoo hadda ay Dowladdu saxday, Waxaana Warsaxaafadeedkan dambe dusha sare looga qoray sixitaan.
Madaxwaynaha Jamhuuriyadda Federaalka Somalia, Md Maxamad C/laahi Farmaajo ayaa isna ku soo qoray Bartiisa Facebook inuu ka tacsiyaynayo Shacabkaasi la dilay, wuxuuna amray Madaxwaynuhu in arrintan baaris lagu sameeyo.